ဗုဒ္ဓဘာသာဝင်တိုင်း သိထားသင့်တဲ့ ဆံတော်ရှင် ကျိုက်ထီးရိုးစေတီတော်မြတ်ကြီး ရဲ့အံ့ဖွယ် (၉) ပါး – Let Pan Daily
ဗုဒ္ဓဘာသာဝင်တိုင်း သိထားသင့်တဲ့ ဆံတော်ရှင် ကျိုက်ထီးရိုးစေတီတော်မြတ်ကြီး ရဲ့အံ့ဖွယ် (၉) ပါး
Let Pan | August 31, 2020 | Knowledge | No Comments
ပရိသတ်ကြီးတို့ရေ ကျိုက်ထီးရိုးဆံတော်ရှင်စေတီတော်မြတ်ကြီးကို ဖူးမြော်ဖူးကြမှာပါ……ကျိုက်ထီးရိုး စေတီတော် မြတ်ကြီးဟာ ကျနော်တို့ မြန်မာနိုင်ငံမှာရှိ တဲ့ တန်ခိုးကြီးဘုရားလေးဆူထဲမှာ တစ်ဆူအပါအဝင်ဖြစ်ပြီး အရှေ့ရိုးမတောင်တန်း၏ ပေါင်းလောင်းတောင်ပေါ်မှာ စံပယ်တော်မူလျက်ရှိပါတယ်။
ပင်လယ်ရေမျက်နှာနှာပြင်အထက် ပေ ၃၆၀ဝ မှာရှိပြီး စေတီတော်ရဲ့ ကျောက်တုံးကြီး လုံးပတ်က ၅၅ တောင် တစ်မိုက်ခန့်ရှိပြီး အမြင့်ကတော့ ၈၃ တောင်မြင့်ပါတယ်။ မြတ်စွာဘုရားဆံတော်များ ကိန်းဝပ် အပူဇော်ခံယူနေတယ်ဆိုတဲ့ ယုံကြည်မှုနဲ့ မြန်မာနိုင်ငံအရပ်ရပ်က ဘုရားဖူးများ လာရောက်ဖူးမြော်ကြသည်သာမက အခုနောက်ပိုင်းမှာ နိုင်ငံတကာက ကမ္ဘာလှည့်ခရီးသွားတွေပါ လာရောက် ကြပြီး စည်ကားလျက်ရှိပါတယ်။
မရောက်ဖူးသေးတဲ့ မိတ်ဆွေများအတွက် ကျိုက်ထီးရိုးစေတီတော်ကြီးရဲ့ အံဖွယ် ၉ ပါးကို ပြောပြပေး လိုက်ပါတယ်…
( ၁ ) မြတ်စွာဘုရား ဆံတော်မြတ်ကို မိမိဆံကျစ်၌် အမြဲ ကိုးကွယ်သော တိဿရသေ့ကြီး နာမကျန်းဖြစ်၍ ထိုဆံတော်မြတ်ကို ဌာပနာ၍ ဘုရားတည်လိုသောအခါ သိကြားမင်းသည် ထိုရသေ့၏ ဦးခေါင်းနှင့်တူသော ကျောက်တုံးကြီးကို သမုဒ္ဒရာအတွင်းမှဆောင်ယူ၍ ကျိုက်ထီးရိုးကျောက်ဆောင်ထိပ်၌ ဘုရားတည်ရန် တင်ထားခြင်း။
(၂ ) ထိုကျောက်တုံးကြီးသည် ကျောက်တောင်စောင်းထိပ် ၌ တည်ပါလျက် ငလျင်လှုပ်ခြင်းစသော အကြောင်းကြောင့် ရွေ့လျားခြင်း မရှိခြင်း။ (၃) ထိုကျောက်တုံးကြီးပေါ်၌ ခက်ခဲစွာစေတီတည်ထားခြင်း။ ( ၄ ) မြတ်စွာဘုရား၏ ဆံတော် ဌာပနာခြင်း။
(၅ ) ကမ္ဘာပေါ် တွင် ကျိုက်ထီးရိုးစေတီနှင့်တူသော စေတီမရှိခြင်း။ ( ၆ ) ဘုရားဖူးတို့သည်ခက်ခဲစွာ တောတောင်လျှိုမြောင်တို့ကို ဖြတ်ကျော်၍ တောင်တက်ဘုရားဖူးရခြင်း။ ( ၇ ) ဘုရားဖူးတို့သည် ဖူးမဝဖြစ်၍ နောက်ထပ်လာရောက် ဖူးပါရစေဟု ဆုတောင်းခြင်း၊ အခေါက်များစွာ လာရောက်ဖူးမြော်ကြရခြင်း။
( ၈ ) ဘုရားဖူးတို့သည် ဘေးရန်အန္တရာယ်မရှိ၊ ကြည်နူး ချမ်းသာခြင်း။
( ၉ ) နှစ်စဉ်မပျက် တောင်တက်ဘုရားဖူးများ အဆင်းအတက် ရှိလျက်ရင် ပြင်တော်၌ ပြည့်ကြပ်များပြားခြင်း။ ဒါကြောင့် ဗုဒ္ဓဘာသာဝင်ပရိသတ်ကြီးတို့လည်း ဆံတော်ရှင်ကျိုက်ထီးရိုးစေတီတော်မြတ်ကြီးကို မဖူးမြော်ဖူးသေးရင်လည်း သွားရောက်ဖူးမြော်နိုင်ကြပါစေလို့ဆုတောင်းပေးလိုက်ပါတယ်နော်.
ဗုဒ်ဓဘာသာဝငျတိုငျး သိထားသငျ့တဲ့ ဆံတျောရှငျ ကြိုကျထီးရိုးစတေီတျောမွတျကွီး ရဲ့အံ့ဖှယျ (၉) ပါး
ပရိသတျကွီးတို့ရေ ကြိုကျထီးရိုးဆံတျောရှငျစတေီတျောမွတျကွီးကို ဖူးမွျောဖူးကွမှာပါ……ကြိုကျထီးရိုး စတေီတျော မွတျကွီးဟာ ကနြျောတို့ မွနျမာနိုငျငံမှာရှိ တဲ့ တနျခိုးကွီးဘုရားလေးဆူထဲမှာ တဈဆူအပါအဝငျဖွဈပွီး အရှရေို့းမတောငျတနျး၏ ပေါငျးလောငျးတောငျပျေါမှာ စံပယျတျောမူလကျြရှိပါတယျ။
ပငျလယျရမေကျြနှာနှာပွငျအထကျ ပေ ၃၆၀ဝ မှာရှိပွီး စတေီတျောရဲ့ ကြောကျတုံးကွီး လုံးပတျက ၅၅ တောငျ တဈမိုကျခနျ့ရှိပွီး အမွငျ့ကတော့ ၈၃ တောငျမွငျ့ပါတယျ။ မွတျစှာဘုရားဆံတျောမြား ကိနျးဝပျ အပူဇျောခံယူနတေယျဆိုတဲ့ ယုံကွညျမှုနဲ့ မွနျမာနိုငျငံအရပျရပျက ဘုရားဖူးမြား လာရောကျဖူးမွျောကွသညျသာမက အခုနောကျပိုငျးမှာ နိုငျငံတကာက ကမ်ဘာလှညျ့ခရီးသှားတှပေါ လာရောကျ ကွပွီး စညျကားလကျြရှိပါတယျ။
မရောကျဖူးသေးတဲ့ မိတျဆှမြေားအတှကျ ကြိုကျထီးရိုးစတေီတျောကွီးရဲ့ အံဖှယျ ၉ ပါးကို ပွောပွပေး လိုကျပါတယျ…
( ၁ ) မွတျစှာဘုရား ဆံတျောမွတျကို မိမိဆံကဈြ၌ျ အမွဲ ကိုးကှယျသော တိဿရသကွေီ့း နာမကနျြးဖွဈ၍ ထိုဆံတျောမွတျကို ဌာပနာ၍ ဘုရားတညျလိုသောအခါ သိကွားမငျးသညျ ထိုရသေ့၏ ဦးခေါငျးနှငျ့တူသော ကြောကျတုံးကွီးကို သမုဒ်ဒရာအတှငျးမှဆောငျယူ၍ ကြိုကျထီးရိုးကြောကျဆောငျထိပျ၌ ဘုရားတညျရနျ တငျထားခွငျး။
(၂ ) ထိုကြောကျတုံးကွီးသညျ ကြောကျတောငျစောငျးထိပျ ၌ တညျပါလကျြ ငလငျြလှုပျခွငျးစသော အကွောငျးကွောငျ့ ရှလြေ့ားခွငျး မရှိခွငျး။ (၃) ထိုကြောကျတုံးကွီးပျေါ၌ ခကျခဲစှာစတေီတညျထားခွငျး။ ( ၄ ) မွတျစှာဘုရား၏ ဆံတျော ဌာပနာခွငျး။
(၅ ) ကမ်ဘာပျေါ တှငျ ကြိုကျထီးရိုးစတေီနှငျ့တူသော စတေီမရှိခွငျး။ ( ၆ ) ဘုရားဖူးတို့သညျခကျခဲစှာ တောတောငျလြှိုမွောငျတို့ကို ဖွတျကြျော၍ တောငျတကျဘုရားဖူးရခွငျး။ ( ၇ ) ဘုရားဖူးတို့သညျ ဖူးမဝဖွဈ၍ နောကျထပျလာရောကျ ဖူးပါရစဟေု ဆုတောငျးခွငျး၊ အခေါကျမြားစှာ လာရောကျဖူးမွျောကွရခွငျး။
( ၈ ) ဘုရားဖူးတို့သညျ ဘေးရနျအန်တရာယျမရှိ၊ ကွညျနူး ခမျြးသာခွငျး။
( ၉ ) နှဈစဉျမပကျြ တောငျတကျဘုရားဖူးမြား အဆငျးအတကျ ရှိလကျြရငျ ပွငျတျော၌ ပွညျ့ကွပျမြားပွားခွငျး။ ဒါကွောငျ့ ဗုဒ်ဓဘာသာဝငျပရိသတျကွီးတို့လညျး ဆံတျောရှငျကြိုကျထီးရိုးစတေီတျောမွတျကွီးကို မဖူးမွျောဖူးသေးရငျလညျး သှားရောကျဖူးမွျောနိုငျကွပါစလေို့ဆုတောငျးပေးလိုကျပါတယျနျော.
မကျြရညျယို ဗုံး အန်တရာယျ နှငျ့ တကယျ လို့ တိုကျခိုကျခံရပွီ ဆိုရငျ ဘယျလို ကာကှယျ မလဲ…?